Izizathu Eziyisishiyagalolunye Izinja Ziklewula Futhi Yini Ongayenza Ngayo - Ezempilo
Abanikazi bezinja abaningi bahlala futhi bahleka izinja zabo zihewula i-siren ye-ambulensi, ingoma ethile emsakazweni noma kumculo wetimu ye-TV.
Labo kini abanezingane ezidlala insimbi yomculo mhlawumbe baphawule ukuthi izingane nenja kufanele ziqale iqembu lomculo. Kodwa kungani izinja zikhala? Futhi kungani behewula izinto ezithile ezinjengezinhlabamkhosi isibhakabhaka sasebusuku, inyanga, ama-ambulensi namathoyizi anciphayo?
Ukuhewula umsindo ophakeme, osetshenziswa kakhulu njengendlela yokuxhumana ukudlulisa imininingwane esemqoka . Okhokho babo basendulo babezoncika ekukhaleni kokugcina izilwane ezidla ezinye kude nabo futhi bazise amaphakethe abo ukuthi azi indawo yabo.
Uma ubheka izinhlabamkhosi, imisindo nemicimbi yansuku zonke edala umsindo; eziningi ziphakeme kakhulu. Ngenkathi inja ingazi lutho olungcono, zibabona njengokuhewula, ngakho-ke bakhethe ukuxhumana.
Iningi izinja ezinjengempisi abalahlekelwanga yilomzwelo wemvelo, futhi bazoklewula izinto eziningi ezibandakanya:
Lapho Izingane Zikhala
1. Kungani Izinja Zikhalela E-Sirens?
2. Kungani Izinja Zikhalela Umculo?
3. Kungani Izinja Ziklewula Ngenyanga?
4. Kungani Izinja Zikhalela Ebusuku?
5. Kungani Izinja Zikhala Ngomsindo Uma Uhhewula?
6. Kungani Izinja Zikhalela Emalolini Omlilo?
7. Kungani Izinja Zikhalela Lapho Izingane Zikhala?
8. Kungani Izinja Ziklewula Ezitimeleni?
9. Kungani Izinja Zikhalela Amathoyizi AseSqueaky?
Lona ngomunye wemisindo ejwayelekile inja ezokhala ngayo.
Izinhlobo ezingakhononda kakhulu kuma-siren yizinja ezinjengezimpisi ezinjenge-German Shepherds, Malamutes, Huskies, Shiba Inus kanye ne-Northern Inuits. Iningi lalezi zinhlobo ngeke zikhonkothe, zizomane zihhewule.
I-siren ingumsindo ophakeme ngokumangazayo futhi omkhulu owenza umsindo phakathi Ama-Decibel angu-110 kuya kwangu-130 .
Inja yakho cishe ibona i-siren njengenye inja, ngakho bayakhala . Abanikazi abaningi bacabanga ukuthi inja yabo iyasabela ngoba umsindo omkhulu ulimaza izindlebe zabo, kepha noma ukuzwa kwenja kuzwela kakhulu kunokwethu, izinja kungenzeka zikhale noma zibubule lapho zisebuhlungwini, ngokungafani nokuhhewula.
Njengezinhlabamkhosi, ezinye izingoma emsakazweni zingashisa phezulu, ikakhulukazi uma ungumlandeli we-opera!
Isizathu salokhu silula, amathuba okuthi inja yakho ihewula umculo ngoba ubakhuthazile ukuthi benze njalo.
Mhlawumbe ngolunye usuku, inja yakho yaqala ukukhala ngomculo (ngoba yayiphakeme kakhulu). Ube usuthola uthandeka futhi waxhumana naye.
Siyakwazi lokho izinja ziyafunda kusukela emiphumeleni yezenzo zabo, ngakho-ke ngokusabela okuhle okuvela kuwe, wacabanga, “yeyi, yilokhu afuna ngikwenze!” Ngakho-ke, isikhathi ngasinye lapho udlala leyo ngoma ethile, uyahhewula.
Uma uke wabukela inja yakho ihewula, uzobona masinyane iwashi ukuthi bazothambekisela ikhanda labo emuva. Lokhu kuvame ukunika isithombe sokuthi bayakhala enyangeni.
Kukhona impikiswano yokuthi umjikelezo wenyanga une- umthelela ekuziphatheni komuntu . Olunye ucwaningo lukhombisa ngezikhathi ezithile zomjikelezo wenyanga, abantu bangakhathazeka kakhulu, babe nolaka futhi baphikisane.
Kungaphikiswa ukuthi izinja ziyahhewula phakathi kwalo mjikelezo ngoba zihlushwa ukukhathazeka ngokwehlukana, noma ngabe kunesizathu esingcono?
Kubanikazi abaningi bezinja, ngaphandle uma uhlala edolobheni elinamatasa, umhlaba uthule kancane ebusuku. Ngaleso sizathu, umsindo uhamba uye phambili (noma kunalokho, imisindo ethile izwakala kangcono ngaphandle kwe-drone yangemuva yokuphila kwasemini).
Kusihlwa, inja yakho kungenzeka ikwazi ukuzwa ukukhala kwezinja ezikude kakhulu .
Izinja zivame ukukhala kakhulu ebusuku, noma ekuseni. Ngakho-ke ngokuzenzakalela, uma umhlaba uthule kancane, izinja eziningi kungenzeka zizwe, okwenza izinja eziningi ziphendule futhi zixhumane.
Uma inja ithatha ukukhala noma ukukhonkotha kwenye i-canine, bangase bababuyisele.
Izwe ngokuvamile lithule kancane ebusuku, imisindo izwakala kangcono ngisho nasendaweni eqhele kakhulu, ikakhulukazi uma umoya uhamba ngendlela efanele.
Izinja ezihlushwa ukukhathazeka ngokwehlukana kwesinye isikhathi zizokhonkotha noma zihhewule ebusuku ; Lokhu kungenxa yokuthi bangashiywa bodwa phansi ngenkathi ulala.
Ngokuthakazelisayo, lokhu kubuyela okhokho babo.
Uma bejwayele ukuba sephaketheni futhi ngokuzumayo, sebebodwa, ngabe bazama ukuthola lonke iphakethe labo? Izimpisi zinjalo ngokubambisana (ngisho nangaphezu kwenja yasekhaya).
Ukukhathazeka ngokwehlukana kuvame ukubonakala ngokunye ukuziphatha okufana:
Indlu yangasese engafanele
Ukuziphatha okuhlobene nengcindezi
Uma ukhathazekile sicela ufune ukwesekwa kochwepheshe ekuphatheni lokhu.
Izinja zizoklewula zisabela komunye umsindo eziwubonayo njengokukhala (isb. imisindo ephezulu, abantu ukuhewula njll.).
Cishe bacabanga ukuthi noma iyiphi yale misindo ivela kwenye i-canine.
Kwesinye isikhathi bangahewula ngokususelwa empendulweni abayitholayo, ngokufana nokuthi kungani becula kanye nomculo!
Izinhlobo eziningi zilangazelela kakhulu ukujabulisa, ikakhulukazi izinja ezisebenzayo . Lokho wukuthi, bayayithanda impendulo enhle abayithola kuwe lapho benza isimilo esithile.
Ukhuthaza inja yakho ukuthi yenze okuthile, uma bekwenza futhi uziphathe ngokuhlanganyela futhi uyabadumisa. Kubo, lokhu kuyimpendulo enhle, futhi isimo sakho sibatshela ukuthi baphinde lokho kuziphatha.
Amaloli ezicishamlilo anezinhlabamkhosi ezinamandla, angakhipha umsindo ozwakala kakhulu kunokusuka kwendiza enkulu . Badinga lokhu ukuze badlule emigwaqweni egcwele abantu baye ezimeni eziphuthumayo, kodwa inja yakho ayikwazi lokhu!
Kuvamile ukuthi abanikazi bezinja bacabange ukuthi inhlabamkhosi ilimaza izindlebe zezinja zabo, kodwa lokhu akunakwenzeka. Izinja eziningi, ikakhulukazi izinja ezihlungiwe, zingamangalisa ekufihleni ubuhlungu. Ezimweni ezimbi kakhulu zobuhlungu , bazokhala noma babubule, kepha kaningi kunalokho, bazokhotha izindebe zabo, baphendukise amakhanda abo noma bakhefuzele ngokweqile.
Ukuhewula akuvamile ukuthi kube uphawu lobuhlungu ezinjeni. Lapho bezwa ubuhlungu noma ukucasuka bayabamba noma khotha kuyo . Bekungeke yini kwenzeke ukuthi uma umsindo ubalimaza, bazibambele ezindlebeni zabo, bazame ukuzimboza, kunokuba bahlanganyele kule khorasi ?!
Inja yakho cishe ibheka i-siren njengokukhala okungajwayelekile kakhulu kusuka kwenye inja.
Imindeni eminingi esencane enezinja ikubonile lokhu.
Ingane iqala ukukhala, bese inja iqala ukukhala kanjalo nenja kamakhelwane. Ungaphumula olwazini kunesizathu salesi siphithiphithi.
Ezinye izingane zizoyeka ukukhala lapho inja iqala ukukhala njengempendulo eshaqisayo. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi izinja zithola ukusuleleka ngokomzwelo lapho ingane yomuntu ikhala. Ngamafuphi, baba nozwelo.
Kungani inja ikhala ngokukhala manje inezincazelo ezimbili ezingaba khona:
Uma inja izwelana, khona-ke ngokwemvelo ingathanda ukunciphisa ukucindezeleka kwengane. Uma, ngokuhhewula, ingane iyeka ngenxa yenani lokushaqeka; enjeni, usizi luyancipha
2. Impisi ibingakhala ikhulume ngendawo; lokhu kungaba uma belahlekile noma kungenzeka uma bedinga ukwesekwa kwephakeji labo. Uma umntwana ekhala futhi inja ikubona njengokunye ukuhhewula, bayakhala njengokuphendula njengendlela yokuthi, 'Ngikhona!'
Ijubane lapho isitimela sihamba khona emigwaqeni yesitimela nasesibophini sidala umsindo omkhulu. Akugcini lapho, kepha izitimela zivame ukusebenzisa izimpondo, amakhwela nezinsimbi. Yonke le misindo ingadala ukuthi inja yakho ihewule .
Ngokuya ngokuthi ukude kangakanani nethrekhi, ezinye izinja zingakhonkotha izingqamu ezenziwe izitimela, uma kunjalo ikakhulukazi qaphela izinja zasendlini .
Kulezo zinja amathuba okukhala ngaphezu kokukhonkotha, lokhu kungaba yikorasi yomphakathi nenye inja ekhonkothayo.
Kuneziphakamiso eziningi zokuthi amathoyizi anciphayo afane nomsindo wesilwane esesabayo noma esilimele, naso, esishisa idrayivu yempango yenja. Izinja eziningi zizonyakazisa ithoyizi lazo eliwuzwilana, noma zihlafune, futhi ziququde zize zikwazi ukukhiphela ngaphandle.
Ithuku lingokwemvelo, ikakhulukazi kulezo zinja ezazingabazingeli bomlando!
Lokhu kusikisela lokhu, ukuthi lapho kungabikho ukuqonda ukukhala njengokukhala, babona ukukhala njengezisulu, ukuzingelwa . Siyazi izinja eziningi ziyakhala ukwazisa umnikazi wazo ukuthi bathole isisulu!
Okwamanje, sethemba ukuthi mhlawumbe ucabangele ukuthi izinja zizoklewula zisabela emisindweni ephezulu ngoba ziyibona njengethuba lokuxhumana.
Ukukhala kungokwemvelo ezinjeni eziningi ezifuywayo; ikakhulukazi ukuxubana kwempisi.
Kunjani okhokho babo umhlaba uxhumana nepakethe yabo (bayisebenzise njengohlobo lwe-GPS).
Noma abantu beveze izindlela ezintsha zokuziphatha nezimpawu ezinjeni ezifuywayo, izakhi zofuzo zabo zihlala zinjalo. Kusondele ngisho nokhokho babo izinja ezinjengempisi , lezi yizinhlobo ezivame ukugcina ukuthambekela kwazo.
Ukuhewula umsindo ophakeme. Ukuchazwa okungenzeka kakhulu kokuthi kungani inja ikhala, ingabe babona imisindo ephezulu kakhulu njengomzamo wokuxhumana nabo.
Uma inja yakho imane iklewula izingoma noma izinhlabamkhosi, ayikwazi nje ukuzamazamisa lowo muzwa .
Sazise ukuthi inja yakho ikhala kanjani ngezansi!
Izinja ezi-22 ezihamba phambili zomndeni zezingane nabazali abamatasa
Umhlahlandlela Wokujula Kumxube WaseJalimane Umalusi Rottweiler
i-cocker spaniel ne-retriever yegolide
ukuhlanganiswa kwe-rottweiler nemidlwane ye-pitbull
izithombe zezinwele ezinde ze-chihuahuas
shih tzu kanye yorkie zohlobo